Madagascar Oil: asa hitaterana ny solika mavesatra | NewsMada
Madagascar Oil: asa hitaterana ny solika mavesatra
Hiditra amin’ny fananganana ny fotodrafitrasa hitaterana ny solika mavesatra, miainga avy any Tsimiroro, mankany Maintirano ny orinasa Madagascar Oil Sarl (Mosa). Napetraka ny 28 septambra teo tany amin’ny seranan-tsambon’i Maintirano, ny vatofototra mikasika izany. Mizara roa ny asa. Voalohany, ny fanarenana ny lalam-pirenena RN 1 bis, avy any Tsimiroro hatrany Maintirano hitaterana ny solika menaka mavesatra amin’ny fiarabe hatreo amin’ny seranan-tsambon’i Maintirano. Nambaran’ny admnisitratera jeneraly (AD)-n’ny Madagascar Oil, Russell Kelly, fa haharitra enim-bolana ny asa, raha vao azo ny fahazoan-dalana avy amin’ny minisiteran’ny Asa Vaventy. Hotaterina amin’ny sambo madinika ny solika avy eo, mankeny afovoan-dranomasina, hamindrana azy amin’ny sambo vaventy, hiondrana any ivelany. Faharoa, ny fananganana ny fotodrafitrasa fantsombe hitaterana ny solika avy any Tsimiroro mankeny amin’ilay fiantsonana ho an’ny sambo vaventy. Ho vita ao anatin’ny roa taona ny asa.
Mahatratra 160.000 barila ny solika menaka mavesatra efa voatrandraka zakan’ny sinibe fitahirizana any Tsimiroro. Natsahatra ny fitrandrahana avy eo, ary tonga amin’izao fanondranana any ivelany izao.
Hitondra fampandrosoana ho an’ny distrikan’i Maintirano, sy ny faritra Melaky ity dingana vaovao hataon’ny Madagascar Oil ity. Nangatahan’ny lehiben’ny faritra, Dolsain Guy Arvely koa ny hanamboarana ny lalana ao an-tampon-tanànan’i Maintirano.